विप्लवको ताजा अन्तरवार्ताः क्रान्ति गर्छौंगर्छौं, सेना-प्रहरी दमनमा आउनु हुँदैन, बरु मिलौं — OnlineDabali
विप्लव, महासचिव नेकपा
हो, यो सही हो । यसो भनेर केही खराब र जासुस प्रकारका मान्छेले भनेजस्तो ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ भने होइन । हामीले केन्द्रीय समितिबाटै भनेका थियौँ– नेपालमा दलालहरू र नेपाली जनताका बीचको अन्तर्विराध आजको सबैभन्दा मुख्य सङ्घर्ष हो । दलाल भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा घुसेर विदेशी मालिकको इसरामा नेपालमा शासन गर्न खोज्ने दलाल, लुटेरा, जनघाती, राष्ट्रघाती, भ्रष्ट तत्वहरू हुन् । तीमध्ये राजनीतिक क्षेत्रका दलालसँग यो चुनावमा सङ्घर्ष परेको हो । यहाँ कस्ता खराब तत्व छन्, तपाईंहरू पनि जान्नुहुन्छ र आम जनताले पनि बुझेका छन् ।
यो चुनावमा देश बेच्ने, कर्णाली बेच्ने, अरुण बेच्ने, नेपालका उद्योगहरू बेचेर खाने, कमिसनको चक्करमा युवकयुवती बेच्ने, क्रान्ति बेचेर खाने, कतिसम्म भने जनमुक्ति सेनाको मासिक ५ हजार र दैनिक भत्ताबाट पनि कमिसन झिकेर अर्बौं रूपैयाँ खाने लिच्चडहरू छन् । यस्तालाई कारबाहीको सुरुआत मात्र भएको छ । यत्ति कारबाहीमा पनि जनता खुसी छन् । यिनलाई धुलो काढ्न त बाँकी नै छ । यी तत्वहरू व्यक्ति त हुन् तर सामान्य व्यक्ति नभएर राष्ट्रघाती, जनघाती, भ्रष्ट र विषालु व्यक्ति हुन् । यस्तालाई कारबाही गर्नु न्यायिक फैसला हो ।
एमाले–माके मिलेर निर्माण गरेको वाम गठबन्धनका तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो ? यसले तपाईंहरूको आन्दोलनमा केही प्रभाव त पार्दैन ? उनीहरू पार्टीएकता गर्ने, स्थिर सरकार बनाउने, देशको विकास गर्ने कुरा गरिरहेका छन् त !
एमाले-माके गठबन्धन झापा विद्रोह र जनयुद्धबाट भागेका, पछि फर्केका, विचलित भएका, आत्मसमर्पण गरेका र वैज्ञानिक समाजवादको महान् आदर्शबाट च्यूत भएका आत्मसमर्पणवादी, संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी प्रवृत्तिहरूको गठजोड हो । यसमा पनि एमालेका केही आफ्नै विशेषता छन् । उसले पहिले वैचारिक, राजनीतिक संश्लेषण (बहुदलीय जनवाद) गरेर अलि लामै समयदेखि संसद्वादमा प्रवेश गराएको छ । माके र त्यसका भगौडाहरूको शरीरमा त सहिदहरूको रगतका दाग पनि मेटिएका छैनन् । यो त एमालेलाई प्रतिक्रियावादी घोषणा गरेर सफाया गर्नुपर्छ भन्ने अनैतिकहरूको हूल हो । जनयुद्ध बेचेर खाने अधमहरूलाई के भन्ने ! यो कसरी ‘वाम’ हुन्छ ! यो त कम्युनिस्ट चिह्न प्रयोग गरेको नवपुँजीवादी समूह हो । यस प्रवृत्तिलाई हामीले नयाँ उचाइमा संश्लेषण गर्दै ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ भन्ने सोचेका छौँ ।
एमाले-माके गठबन्धनले हाम्रो पार्टी र क्रान्तिलाई असर त गर्छ तर सकारात्मक असर गर्छ । उनीहरू पुँजीवादी संसद्वादमा पतन भएका तत्व हुन् र क्रान्ति आवश्यक छ भनेर त हामीले प्रचण्ड-बाबुरामको आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादबाट विद्रोह गरका हौँ । त्यही पुष्टि भएको छ भने हामीलाई यसले सही साबित गर्छ र जनता उनीहरूबाट झन् धेरै स्पष्ट बन्नेछन्, बन्नुपर्छ । परिवर्तन र क्रान्तिका पक्षमा रहेका जनताले हामीलाई नै साथ दिनेछन् । जहाँसम्म एमाले-माकेले विकास र समृद्धिको प्रचार गरेका छन् यो प्रचार पानीको फोका हो । जसरी क्रान्ति सकियो र आवश्यक छैन भन्ने प्रचारले हावा खायो त्यसैगरी यो प्रचारले पनि छिट्टै असफलता बेहोर्नुपर्छ । किनकि जुन बेलासम्म दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता कायम हुन्छ त्यहाँ जनताको समृद्धिको सम्भावना हुँदैन । त्यहाँ त दलालहरूको लुटतन्त्र चल्छ । समृद्धि भए पनि दलाल र लुटेरा वर्गको मात्र समृद्धि हुन्छ । तपाईंले चुनावको परिणामपछि देख्नुभयो नि, पद, कुर्सी र सुविधाका लागि उनीहरू कति छुद्र बकबास गर्दै हिँडेका छन् । कसैको कुरा कसैसँग मिलिरहेको छैन । अनि यी तत्वबाट देश उँभो लाग्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ? अहँ यो नचिताए हुन्छ । यत्ति हो, उनीहरूले वैज्ञानिक समाजवादमा जाने आधार भने बनाइदिनेछन् ।
वाम गठबन्धनले चुनावकै बाटोबाट समाजवाद स्थापना गर्ने तहसम्म जाने बताइरहेको अवस्थामा समाजवाद स्थापना गर्न अवैधानिक कार्यक्रम र बाटो नै रोज्नुपर्ने बाध्यता के पर्‍यो तपाईंहरूलाई ?
संशोधनवाद, संसद्वाद र आत्मसमर्पणवादले दुनियाँमा कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद ल्याएको इतिहास छैन र हुने पनि छैन । संसद् र पुँजीवादी संस्थाभित्रबाट भाषण र प्रचार गरेर कहिल्यै पनि वैज्ञानिक समाजवाद पैदा हुनेछैन । संशोधनवादको कोख समाजवादी कोख होइन, त्यो पुँजीवादी कोख हो जहाँबाट वैज्ञानिक समाजवादलाई निषेध गर्ने जण्ड पुँजीवादको जन्म हुन्छ । केपीले समाजवाद जन्माउन खोजेर के हुन्थ्यो ? केपीको कोखमा पुँजीवादको गर्भ छ, त्यही जन्मिन्छ । प्रचण्डको त त्यो पनि छैन । त्यो त बाँझो छ !
जहाँसम्म हामीले अवैधानिक बाटो रोज्यौँ भन्ने प्रश्न छ, यो मिलेन । हामीले रोजेको बाटो नै जनताको इच्छाअनुरूपको वैध बाटो हो । यो बाटो प्रतिरोध र विद्रोहको बाटो भने हो । यसको बाध्यता पुँजीवादी राज्यसत्ता, दलाल संसदीय व्यवस्थाको कारणले पैदा भयो । उनीहरू जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई सखाप पार्न चाहन्छन्; जनयुद्धका योद्धाहरूलाई अपराधी बनाउन चाहन्छन्; नेपालबाट कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई सिध्याउन चाहन्छन्, बन्दुकको नालमा शासन गर्न चाहन्छन् अनि हामीले कसरी उनीहरूलाई फूलपाती र गङ्गाजल छर्किन सक्छौँ ! यो हामीले नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध गरेको प्रतिरोध र विद्रोह हो जो जनताको मतद्वारा अनुमोदित छ ।
तपाईंहरूले अघि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा, मालेमामा विकास र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबारे, तपाईंहरूको कार्यक्रमबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र आलोचनासमेत भइरहेको छ नि ? कसरी फस्र्याउनुहुन्छ ती विषय ?
हो, हामी त्यो सम्भावना देख्छौँ र त्यसो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । हाम्रो पार्टीले भनेको छ– नेपाल देशको स्वाधीनता सर्वाधिक जोखिममा छ । जनताको जीवन गरिबीको मारमा पर्दै गएको छ । भरखरै प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालमा गरिबी झन् बढेको छ । युवकयुवतीको हालत के छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । देशलाई यस्तो हालतमा पुर्‍याउने बदमासहरू यिनै संसद्वादी दलका दलाल नेताहरू हुन् । हामीले देशलाई यी तत्वहरूबाट मुक्त नगरेसम्म जनताको अवस्था माथि उठ्नेछैन । त्यसका लागि हामी दलाललाई फाल्ने क्रान्ति त गर्छौंगर्छौं, त्यसलाई बचाउन र हामीमाथि दमन गर्न नेपाली सेना र प्रहरी आउनु हुँदैन, बरु सबै मिलेर यिनलाई फालौँ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ । यो सोचाइप्रति सुरक्षा शक्ति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण हामी देख्दैनौँ । त्यस अर्थमा यो सम्भव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
विषय ठिकै भन्नुभयो तर उत्तरकोरियासँग अमेरिका गलिसक्यो पनि नभनौँ । कुरा के सत्य हो भने प्रतिरोध, स्वाधीनता र प्रगतिसहितको आत्मरक्षा भन्ने दृष्टिकोण नै पुँजीवादसँगको प्रतिस्पर्धामा वैज्ञानिक र वस्तुवादी दृष्टिकोण हो । उत्तरकोरिया यसैको नमुना हो । जहाँ प्रतिरोध र स्वाभिमान छ त्यहाँ मात्र रक्षा र उन्नति सम्भव छ । जहाँ आत्मसमर्पण र दलालीगिरी हुन्छ त्यसको पतन र विनाश अनिवार्य छ । उत्तरकोरियाले पुँजीवादलाई परास्त गर्दैनथ्यो र वैज्ञानिक समाजवादी मार्ग पकड्दैनथ्यो भने, कोरियाले अमेरिकाविरुद्ध प्रतिरोधको बाटो लिँदैनथ्यो भने उत्तरकोरियाको हालत पूर्वी जर्मनीकै जस्तो हुन्थ्यो । तर उत्तरकोरियाले सही बाटो लिएपछि अमेरिका पछि हट्न बाध्य भएको छ ।
अमेरिकाले निःसर्त वार्ताको प्रस्ताव गरेको कुरा हामीले पनि पायौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि वार्ता गर्ने भन्यो । यसभित्र अमेरिकाका अनेकौँ दाउ भए पनि उत्तरकोरिया र उत्तरकोरियाली जनताको एक तहको विजय हो । यसले उत्तरकोरियालाई मिच्न वा हमला गर्न सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश गएको छ । यसो त यो उत्तरकोरियाको मात्र विषय नभएर विश्व जनमतको अभिव्यक्ति पनि हो ।
अरु केही ?
नेपालको पेचिलो तर क्रान्तिको सम्भावनायुक्त समयमा हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने मौका दिएकोमा रातो—खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
प्रहरी प्रमुख गम्भीर घाइते
सञ्‍चारकर्मी शाहस भट्टले संगीत भरेको लोक दोहोरी ‘चोट’ले बजार ततायो (भिडियोसहित)